AT&T: Azu ahia zuru oke nke nzipu ojoo | Martech Zone
AT&T: Azu ahia zuru oke nke nzipu ojoo
Fraịde, Ọgọstụ 31, 2007 Sọnde, Septemba 2, 2007 Douglas Karr
Mgbe anyị kpebiri ịkwaga n’ọfịs anyị gaa na nke ọhụrụ, otu n’ime ndị mbụ m kpọrọ bụ AT&T. Ọ dịghị ihe dị mkpa na nke a aga karịa huu anyị faksị na ekwentị edoghi na-elu.
Mgbe olu ole na ole kpaliri m, onye nnọchianya ahụ kpọrọ ekwentị ngwa ngwa wee zaa ajụjụ niile m nwere. Ọ nwere obi ụtọ, mara ihe ma na-enye aka. Anyị kpebiri ime njem na Saturday na ekwentị ọhụrụ na-abanye na Friday. N'ịbụ ndị ngwụsị izu dị ogologo, anyị chere na ọ ga-abụ nwayọ na igwe ma ọ gaghị emetụta ndị ahịa anyị na atụmanya anyị.
Anyị nwere nọmba 1-800, ụyọkọ ahịrị ndị na-agagharị agagharị, akara akara faksị, na DSL azụmaahịa maka obere azụmaahịa anyị. N’ọfịs ọhụrụ ahụ, anyị jikọtara ịntanetị yana ụgwọ ụlọ anyị ebe ọ bụ na ụlọ ahụ nwere ụlọ ọrụ ịkparịta ụka n'essentialntanet ụfọdụ dị mkpa maka ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ bandwit.
Anyị na-edebe nọmba 1-800 mana anyị kwesịrị inweta nọmba ekwentị ọhụrụ ebe anyị nọ n'akụkụ dị iche nke obodo ahụ, yabụ anyị banyere ọnwa 3 nke izipu ozi na mpaghara ochie iji gwa ndị ahịa anyị nọmba ekwentị ọhụrụ anyị. . Anyị emechiri oku ahụ na akara tiketi iji zoo aka na nsogbu ọ bụla.
Nke ahụ bụ ebe izu okè ahụ gwụsịrị
Ihe dị ka otu izu tupu anyị akwaga, DSL anyị gara. Mgbe otu ụbọchị na ọkara na-agwa AT&T okwu, na-ekwe nkwa na ọ ga-adị tupu njedebe azụmaahịa (ụbọchị gara aga), anyị mechara laghachi DSL anyị. O siri ezigbo ike na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị na ndị na-ere ahịa na-ere ere n’enweghị ohere ọ bụla. Imirikiti mmadụ niile na-arụ ọrụ n'ụlọ kama ichere.
Kechioma maka anyị, AT&T nwere ezigbo iwu nkwụghachi ụgwọ. Maka ọtụtụ puku dollar na azụmaahịa furu efu anyị nwetara akwụmụgwọ $ 119 na ụgwọ anyị.
Ọ na-esiri ndị na-ere ahịa n'èzí ike na-ere enweghị phones. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere otu ụbọchị mgbe e mesịrị. O yiri ka ụfọdụ 'ndozi' maka ịkwaga anyị ozugbo ọrụ na-akwụsị na DSL na akara ekwentị anyị. Anyị tufuru ekwentị maka ụbọchị ọzọ na ọkara. Ugbu a, enwere m obere iwe.
AT & T zipụrụ onye ọrụ ọrụ dị ukwuu nke ya na onye ọzọ na-arụ ọrụ n'èzí iji nweta akara DSL. Mgbe ekwentị mechara gbanwee ya na DSL wee pụọ ọzọ. Oge di na nwunye ọzọ gafere mana Patrick meriri ma weghachite anyị na 100%.
Ruo ụtụtụ taa.
Ka m na-arụ ọrụ n'ụtụtụ a, a gwara m na DSL alawala ọzọ. Enweghị mkpa ịkpọ ọbụna onye ọ bụla, nri? Otu di na nwunye nwere Sprint kaadị n'ọfịs ha bụ obi anyị ruo mgbe anyị rutere n'ọfịs ọhụrụ (ebe netwọkụ dịlarị).
Ekwentị edoghi na-ọma… ụdị. Ọ bụrụ na ị kpọọ ha, ha na-akụ ma na-akụ na mgbanaka. Cheta ozi m nyere iwu na nọmba ekwentị ọhụrụ? Nke ahụ anaghị arụ ọrụ. Yabụ ugbu a anyị enweghị ekwentị na DSL. Achọrọ m ịlaghachi ụra.
Kama nke ahụ, anyị kpaliri ihe anyị niile ma megharia usoro PBX na ebe ọhụrụ ahụ. Mgbe di na nwunye gachara, onye mmezi AT & T gosipụtara. 15 nkeji mgbe e mesịrị, ọ na-ekwu:
Ihe na-ezighi ezi na eriri ahụ ka ha wee nweta onye nrụzi "USB" iji hụ ihe na-eme. Ọ ga-apụ echi a gwa m. N'oge a, onye isi m na-eleta m na-achọpụta na m na-agagharị. Obi dị m ụtọ, ọ nọ n'ime ụlọ ahụ ka m nọ na-ejide ma zigara ya onye ọzọ gaa na nke ọzọ, gaa na nke ọzọ. Mgbanwe ọ bụla a jụrụ m maka ihe akaebe na ọ bụ akaụntụ m (akara 3 ikpeazụ na ụgwọ) yana site n'oge ruo n'oge, a na-ajụ m maka nọmba iwu ọrụ (enwere m abụọ ugbu a… otu maka njem, ọzọ maka nrụzi) .
Onye isi m na-ege ntị ka m ji akọ na-ekwughachi izu nsogbu anyị na AT&T - na-ekwupụta ahịa ole, azụmaahịa ole, yana ntụkwasị obi anyị tufuru n’izu gara aga ya na ndị ahịa na atụmanya anyị. Ọ na-eju m anya na enweghị m ike iti mkpu ma ọ bụ nwụọ, dịka m kọwara - ọtụtụ nkọwa - izu ike AT&T nyere m. Cheta na ọ bụ m nke atọ ọrụ. 🙂
Anyị abụọ na-eju anya na mkparịta ụka ọ bụla anyị na mmadụ nọ na ekwentị kwụsịrị na, ", nwere ike ịsị na afọ ojuju gị n'ọrụ ị natara taa?". "Ee e" bụ azaghachi m ugboro ugboro.
You Chọrọ Ozi Ọma Ka Ọ Bụ Ozi Ọjọọ?
Enwere m onye ọkachamara ugbu a nke nọ ugbu a na-arụ ọrụ na nsogbu USB. Ọ nọ ebe a ruo awa ole na ole ugbu a mana ọ na-enweta usoro ekwentị na-arụ ọrụ. N'ezie, ịgba ọsọ n'akụkụ akụkụ PBX anyị bụ $ 25 na nkeji iri na ise ọ bụla (gịnị kpatara na ha anaghị ekwu $ 15 / hr?).
Ọ na-ekwu, sị, "you chọrọ ozi ọma ma ọ bụ ozi ọjọọ?".
“Ozi ọma, biko.”, M na-aza.
Ọ chọtara nsogbu dị na wiring ekwentị wiring na-agwa m "Enweghị ozi ọma, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi nweta ahịrị."
Agaghị m ewere NO maka azịza.
Anyị nwere ihe dị ka eriri 100 CAT5 ndị ​​na-agagharị n'etiti data data na ụlọ ọrụ anyị ka m wee bulie ogwe ole na ole wee chọta ebe ha gafere. Enwere ụzọ USB na firewall na dobe ụlọ dị n'etiti ya na ụlọ ebe akara ekwentị na-abata. Ọ bụ akara 30 ruo 40 kwụ ọtọ. Ọ na-aga wee nweta eriri si n'ụgbọala ya gbapụ ihe ruru 100 ụkwụ nke eriri.
Ọ bụ 9PM ma anyị nwere usoro ekwentị dị n'ụlọ ahụ. Ana m eche onye ọrụ ahụ ka ọ rụchaa ọrụ ikpeazụ ya - ọ nyela m oge iji dee akwụkwọ ozi a niile. Akara ahịrị ekwentị dị ugbu a n'akụkụ usoro PBX.
Echi ihe niile m ga - eme bụ ịnweta eriri USB na RJ11 ma enwere m ike ịmalite site na jacks ọhụrụ ahụ gaa na usoro PBX ka anyị wee nwee ekwentị na Tuesday.
Nke ahụ bụ…
Nke ahụ bụ, mgbe anyị kwagara. Ana m aga n'isi ụtụtụ echi iji lelee ọpụpụ ọfịs. Ndị otu ahụ abanyela ihe niile, yabụ ndị na-eme njem kwesịrị ịkwaga ya echi. O doro m anya na ọ ga-abụ ogologo ụbọchị.
Aga m agba mbọ hụ na anyị sitere na ekwentị 100% site na njedebe azụmaahịa echi. Taa, etinyere m netwọk anyị, ikuku na-enweghị nsogbu, onye na-ebi akwụkwọ ntanetị, ụlọ ọrụ, wee jikọta cubicles niile site na ogwe osisi dị n'etiti. Ejikwara m usoro ekwentị niile site na patch panel ruo na usoro PBX anyị. Wezụga AT&T, enwetala m ọtụtụ ọrụ rụọ.
Na Tuesday, aga m ekwu okwu na ekwentị na AT&T iji hụ ihe kpatara m ga-eji na-azụ ahịa anyị na ha. Naanị ihe achọpụtara m ka ha rụọ ọrụ nke ọma bụ:
Na-emechi ire ere.
Kwụsị ire ihe ị na-enweghị ike ịnapụta, AT&T. Olee otu o siri sie ike:
Kpọọ ka ị kwado tupu ịkwụpụ DSL anyị?
Kpọọ ka ị kwenye tupu ịkwụpụ akara ekwentị anyị?
Kpọọ ka ị kwenye tupu ịkwụpụ DSL anyị (nke ugboro abụọ)?
Kpọọ ka ị kwenye tupu ịkwụpụ DSL anyị (nke ugboro atọ)?
An nweela ọkachamara ga-eso m zute tupu ụbọchị agafee ị ga-ahụ ụlọ ọhụrụ ahụ wee gafere usoro ọrụ? Agaara m eji obi uto kwụọ $ 25 / hr kwa nkeji 15 maka nke ahụ!
Ọ bụ 9PM. Ejiri Tech ahụ wee rụọ ọrụ ya iji jide n'aka na enwere m obi ụtọ. Obi dị m ụtọ na ya, ọ dị oke njọ maka ụlọ ọrụ ya. M na-ala. Achọrọ m ịlaghachi ebe a na elekere 11 maka ndị na-agagharị na enwere m nkeji iri anọ na ise n'ụlọ.
Echere m na ọ bụ ya mere ha ji akpọ ya "ụbọchị ọrụ izu ụka"!
Mmelite 9/1: Nọmba 1-800 ka na-akpọ nọmba ekwentị ochie ahụ ma agbanyeghị ozi ederede. Mgbe ya na ndị otu 1-800 kwurịtachara okwu, ọ dị ka onweghị onye tinyepụrụ iwu ka emegharị ụzọ ahụ. Mgbe m gwachara mmadụ 4 dị iche iche, achọtara m Injinia nke ga-agafe ụbọchị iwu (ụbọchị azụmahịa mbụ, yabụ ọ ga-abụ ụbọchị Tuzdee ọzọ) iji nweta ọnụọgụ 1-800 na-arụ ọrụ taa.
Ọ dị ka awa 24 ọzọ tupu agbanyere ozi ozi. Ọ ghaghị izipu ozi FAX iji gbanye ya. Rie ude.
Nwelite 9/2: Mbubreyo ụnyaahụ anyị ga-ejikọrịrị ya na Ọkachamara nke Telephony. Ekwenyere m na aha ya bụ Demetria - mana ọ nwetara ihe ọ bụla ọzọ na-arụ ọrụ! A gbaara m àmà na mkparịta ụka ya na onye ọzọ na-eme mkparịta ụka ebe ọ malitere ịrụ ọrụ na nọmba 1-800 ka ọ nyefere ya maka Tuesday na-esote. Ọ nọnyeere anyị n'ehihie ahụ niile ruo mgbe ọ natara ozi ahụ. Onye obula Demetria bu - AT&T kwesiri itinye ya n’aka klas “otu esi emeso onye ahia”!
Daalụ ịdị mma anyị ga-adị na njikere maka Tuesday!
Aug 31, 2007 na 8:38 PM
Oh Nwoke! Azụmaahịa ọ bụla ga - ewepụ nkwụsị niile iji kpughee ọdịda ọrụ nke ịdị ukwuu a.
Nsogbu na ọtụtụ ụlọ ọrụ kachasị dị ka AT&T bụ na ha na-eche na ọ baghị uru ka ha nabata ihe ọ bụla na-adabaghị na usoro kuki. Nwee ọnọdụ nke dara n'azụ ụkpụrụ ha tụrụ anya ya ma achọọ gị.
Echere m na ha na-eche na ha buru ibu buru ibu na azụmahịa gị adịghị ha mkpa. Ọ na-ewute m maka naanị otu teknụzụ ha zitere na ebe gị. Ana m ịkụ nzọ na ha agwaghị ya na ọ ga-arụ ọrụ n'oge Fraịde tupu izu ụka ezumike.
Aug 31, 2007 na 9:47 PM
M nọnyeere gị, Chris. Teknụzụ ọrụ ahụ nke jidere m n'abalị a mere ọtụtụ ọrụ ma bụrụ ezigbo nwoke. Obi dịkwa m ụtọ na o wepụtara oge iji dozie esemokwu ahụ karịa naanị ịgha dị ka onye ọrụ nke mbụ.
Aug 31, 2007 na 8:56 PM
Ma Bell na ya ọzọ…. Enwetụbeghị m, mgbe m nụrụ okwu ọma banyere ọrụ DSL. Ọ bụghị site na teknụzụ, ọ bụghị site na ntinye ọrụ. Anọ m mgbe niile na onye ọrụ USB n'onwe m, gụnyere njikọ ekwentị m VoIP. Ruo ugbu a, nsogbu adịghị. Ekwenyesiri m ike na nke ahụ bụ ụtụ maka usoro ntanetị - ụda ọla kọpa, otu isi maka ihe niile. N'ezie, m na-adịghị atụ anya ka ike outage… yikes!
Aug 31, 2007 na 9:49 PM
O doro anya na enwere m DSL na AT & T n'ụlọ ma ọ bụ ihe siri ike maka afọ 2 na ọkara. Obi dị m ụtọ na akpọtụbeghị m ka m gbanwee ọrụ a, agbanyeghị!
Sep 1, 2007 na 3: 45 AM
Nke ahụ bụ ịma jijiji na egwu. You ga-ajụ maka nkwụghachi ụgwọ ọ bụla? Enwere m olileanya na nke a na-enweta ezigbo mkpuchi na onye na AT&T lee nke a.
Nwere olile anya na ị ga-enwe ihu ọma karịa ndị ọzọ na-agagharị.
Sep 1, 2007 na 6: 28 AM
Kedu ọgbaghara. Na-eme ka ụfọdụ ụdị ohere ịnweta ebe niile dị mma, ọ bụghị ya? Ọ bụ ezie na nke ahụ agaghị eme ka ndị na-erughị eru kwụsị imechi ihe n'oge na-ekwesịghị ekwesị…
Ndo, i nweela ụdị egwu dị otu a ogologo - izu ụka-loooonggg.
Sep 1, 2007 na 1:05 PM
M gbakwunyere mmelite 9/1 taa.
Sep 1, 2007 na 4:38 PM
Nke a na - eme ka “onye ọhụụ ahụ nweta ọrụ ruru unyi” na ọkwa ọhụrụ! Nwere olileanya na anyị ka nwere ike ịhụ gị echi!
Sep 1, 2007 na 9:00 PM
Mụ na Katie ka na-eme atụmatụ ịnọ ebe ahụ.
Fọdụ dike na-enweghị aha na AT&T nyeere anyị aka idozi nke ikpeazụ nke nsogbu anyị n'ehihie a. Ọ ga-arụrịrị na akaụntụ anyị maka awa 4 ma ọ bụ 5 ogologo. N'otu oge, ọ kpọkọtara onye ọzọ na ekwentị wee gwa ha ka ha dee akwụkwọ ọrụ ahụ na ọ ga-emecha ya MGBE anyị nọ na ekwentị. Amaghị m onye ọ bụ, mana obi dị m ụtọ na ọ mere ịkpọ ekwentị ahụ!
Sep 1, 2007 na 11:22 PM
Ee! Nwere olile anya na oga enweta ugwọ ozo buru ezumike ezumike. Na ekele na-aga n’ihu ifelata!
Sep 2, 2007 na 9:09 PM
Hey Doug na-enwe obi ụtọ na ọ rụpụtara mgbe nsogbu niile jọgburu onwe ya gasịrị. Ekwenyesiri m ike na anyị niile nwere akụkọ egwu anyị ịkọ mana nke gị n'elu ọtụtụ ndị m nụrụ ma ọ bụ tinye aka na ya! Jisie si ebe a pụọ.